Shiinaha soo qaado & adeeg fulin baako iyo wakiil | Sunson
Sidee ayuu xulkeenna iyo adeegteennu u caawiyay macaamiisha?
Macaamiilkii ayaa yiri: Waxaan aad ula yaabay xirmada alaabtu inay aad u qurux badan tahay, badeecaduna sideedii tahay, macaamilkuna aad ugu qanacsan yahay. —— Roman
Waxaan bixinaa adeeg si buuxda u soo qaadasho iyo xirmo fulin loogu talagalay oo ku habboon baahiyahaaga ganacsi!
99.6% qaadashada heerka saxda ah
Si buuxda loogu dhexgeliyey websaydhkaaga iyo iibinta meheradaha
Cusbooneysiinta xakamaynta keydka otomaatiga ah
Adeeg maalin isku mid ah
Xirfad ahaan la baakadeeyay
Amarada La Helay
Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo aad adigu heli karto oo ku saabsan sida aan u helno amarradaada waxqabadka.
Xulashada doorbideysa ee macaamiisheena badan ayaa ah in loo ogolaado isdhexgalka API ee Nidaamkeena Maareynta Bakhaarka (WMS) oo leh qalabka iibinta ee ay isticmaalayaan tusaale ahaan Shopify, Amazon, Magento, Woocommerce iwm. Habkani wuxuu hubinayaa in dhamaan amarrada la helo isla markiiba la socodsiiyo loona diyaariyo dirid.
Aad ayaan ugu faraxsanahay heerkayaga saxda ah ee soo qaadista saxda ah. Waxaan u adeegsanaa tikniyoolajiyada barcode si aan u soo qaadanno amarrada kooxdeenuna waxay helaan tababaro ballaaran iyo amarrada marwalba labalaab baa la hubiyaa ka hor inta aan la rarin.
Waxaan keydineynaa xulasho ballaaran oo ah qalabka baakadaha oo ay ku jiraan sanduuqyo kala duwan, baqshadaha xarkaha ah ee baqshada leh iyo ilaaliyaha geeska. Kooxdayadu waxay leedahay khibrad badan oo hubinaysa in alaabada la soo diray oo dhan ay si habboon u baakadeysan yihiin, oo si sax ah loogu calaamadeeyay macluumaadka shirkaddaada iyo wixii agab suuq-geyn / dheeri ah lagu daro.
Sidoo kale waa lagusoo dhaweynayaa inaad keento baakadaada ama waxaan kaa caawin karnaa inaad sameysatid baakado sumadeed oo kuu gaar ah lagana soo saaro dalka Shiinaha faahfaahintaada.
Qaar ka mid ah macaamiisheennu waxay ku lug leeyihiin qaybinta tafaariiqda alaabtooda iyo iibinta Amazon FBA. Waxaan khibrad u leenahay xirxirida amarro isku dhafan oo isku dhafan.
Kooxdayada bakhaarradu waxay xirfad u leeyihiin gudashada shixnadaha ee Xarumaha Amazon FBA iyagoo adeegsanaya aqoontooda iyo khibradooda ayaa ku siin kara habka ugu wax ku oolsan uguna fudud ee wax loo qaybiyo.
Markuu macaamilku u baahdo alaabooyin badan oo kala duwan (SKU) si wada-jir loogu wada rarto, waxaan awood u leenahay inaan amarradaas si fudud oo sax ah u uruurino oo aan kula talinno habka ugu wax-ku-oolsan ee u raridda waddanka hadba waddanka la tagayo.
Doonta isla maalintaas
Qaadashada amarka degdega ah iyo dirista ayaa lagama maarmaan u ah ganacsiga. Waxaan ka soo qaadan karnaa, xirxi karnaa oo rarnaa dhammaan amarrada aad hesho 4ta galabnimo (Waqtiga Beijing) isla maalintaas si adduunka oo dhan loogu gaarsiiyo kanaalka maraakiibta ee aad dooratay.
Tani waxay sidoo kale noqon kartaa mid aad waxtar u leh fulinta ololeyaal ballaaran oo ay maalgeliyaan dad badani, halkaas oo dhammaan amarradaada ay u baahan yihiin in si dhakhso leh loogu diro. Waxaan khibrad u leenahay la shaqeynta ololaha Kickstarter iyo Indiegogo oo keena natiijooyinka ugu fiican macaamiisheenna iyo maalgeliyayaashooda.
Shiinaha Pick & Pack Service
Adeegga Xulista & Xakamaynta Ecommerce
Soo qaado & Xirmo Rarista Adeegga iyo Kaydinta
Adeegga Xulista & Baakadaha ee Shiinaha Shenzhen
Dukaan ku Qaado Xulista & Xirmada Adeegga Shiinaha